Lehilahy tera-tany Frantsay iray 44 taona ao Ambohijafy no saron’ny Sampan-draharaha ny Police Judiciaire eto Toamasina – Vaovao Madagasikara
Lehilahy tera-tany Frantsay iray 44 taona ao Ambohijafy no saron’ny Sampan-draharaha ny Police Judiciaire eto Toamasina tarihan’i Commissaire GERVERIN RAELISON,fa nanao asa fitadiavam-bola mamoa fady ny zoma lasa teo.
Vokatry ny fahazoam-baovao sy fiaraha-miasa ny samy Polisy no hahatratrarana ity ranamana ity raha ny fanazavana voaray eo anivon’ny Polisim-pirenrna eto Toamasina.
Tsy amin’ny fomba mivantana fa mifangaro amin’ny Cybercriminalité ny fomba ampiasainy amin’ny fampiasana ny tranon-kala amin’ny alalan’ny ordinateur misy web cam.
Nandritra ny fidinana nataon’ny polisy rehefa nahazo taratasy fahazoan-dalana,dia vehivavy roa no tratra ambody olona izay mbola eo ampanaovana izany asa proxenetisme izany,na fitrandrahana ny fitaovam-pananahan’ny hafa atao fitadiavam-bola mamoa fady iizay mbola tsy voafaritry ny lalàna misy eto amin’ny Firenena.
Efa nohazonina miaraka amin’ity ranamana ity ireo vehivavy roa ampy taona,tratry ny fanararaotana noho ny fahantrana.
Misy mantsy ny vola aloan’ilay olona mijery izany amin’ny tambajotra raha ny fanazavana azo teo anivon’ny Polisy Judiciaire ka ampahany kely amin’izany vola miditra amin’ilay vazaha no mba azon’ireo zatovo vavy Malagasy,izay mampiasa ireo fitaovana kilalao hita eto amin’ny sary.
Miantso ny rehetra hifanolo-tanana amin’ny eo aminy sy izay rehetra afaka hiara hiasa amin’ny ny ao amin’ny PJ rihana voalohany ao amin’ny Hotel de Police hametrahana ny filaminana eto Toamasina./.